Somali News 10.05.21
Published October 6, 2021 at 2:56 PM CDT
Xildhibaanada Senate -ka Iowa ayaa u codeeyay inay diidaan qorshaha dib -u -qaybintii ugu horreysay ee gobolka ee la soo jeediyay. Degmooyinka la soo jeediyay ee sharci -dejinta iyo shirweynaha waxaa soo saaray Wakaaladda Adeegyada Sharci -dejinta ee aan xisbiyada ahayn.
Dhammaan 32 -da senator ee GOP ayaa ka soo horjeestay qorshaha, dhammaan 18 -kii Dimuqraadi ayaa u codeeyay.
Barasaabka Iowa Kim Reynolds ayaa ku dhaleeceeyay Madaxweyne Joe Biden sida uu u maareynayo amniga xuduudaha oo ay hadda si toos ah u eegi doonto arrinta.
Guddoomiyaha ayaa loo qorsheeyay inuu ku biiro sagaal guddoomiye oo kale oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Hawlgalka, Texas Arbacada.
Tirada kiisaska cusub ee COVID-19 iyo isbitaallada Nebraska ayaa u muuqda inay heer sare ka gaarayaan toddobaadyadii la soo dhaafay.
Xog laga helay CDC ayaa muujineysa in gobolka uu soo sheegay 4,775 xaaladood oo cusub toddobaadkii dhammaaday Jimcihii. Tirada ayaa ka yar celcelis ahaan 5,300 saddex toddobaad oo isku xigta.
Tirada isbitaallada la dhigto fayraska ayaa celcelis ahaan ahaa 415 maalintii toddobaadkii la soo dhaafay, taasoo waxyar hoos uga dhacday usbuucii hore.
Khubarada silsiladda sahaydu waxay dadka ku dhiirri -gelinayaan inay hadda bilaabaan dukaamaysiga fasaxa maadaama caqabadaha uu keenay masiibadu ay la mid noqon doonaan sannadkii hore, oo ay la jiraan caqabado cusub.
Guddoomiyaha waaxda maareynta silsiladda sahayda ee Jaamacadda Gobolka Iowa ayaa sheegaysa inay u badan tahay inay jiraan alaabooyin aan laga heli karin dukaamada ama khadka tooska ah sababtoo ah waqtiyada dhoofinta oo gaabis ah oo ay weheliso yaraanta shaqada.
Wuxuu saadaaliyay heeganka hore ee shahaadooyinka hadiyadu inay noqon karto mid la jecel yahay, oo la isku halayn karo, doorashada sanadkan.
Somali News 10.04.21
Xildhibaannada gobolka ayaa berri ku soo laaban doona Iowa Capitol si ay u yeeshaan kulan gaar ah oo naadir ah. Waxay u codeyn doonaan inay aqbalaan ama…